HUBACHIISA | robemedia
Home AfaanOromo HUBACHIISA
Wayyaaneen poolisoota dhalootaan saba biraa ta’an akka ilmaan Oromoo rukutan ajajuun Oromoof saboota biroo walitti baasuuf tooftaa baafattee jirti.
Tooftaa kanas har’a Harargeefi Wallagga keessatti hojitti hiikuu eegaltee jirti. Tooftaa kana fashalsuu tarsiimoo qabsootiif akkan barbaachisaadha. Poolisin takkaahuu loltuun nama dhahe ofii itti gaafatama malee maatiis ta’e sabni isaa itti hin gaafatamu.
Kanaafu qiiqiin kaka’uudhaan walitti bu’iinsi akka hin uumamne of eeggannoo cimaa goochuu barbaachisa.
Hubadhaa qabsoon Oromoo kan sirna cunqursaafi hattuu irratti godhamu malee kan saba biraa irratti godhamuu miti.
Hubadhaa qabsoon Oromoo kan sirna cunqursaafi hattuu irratti godhamu malee kan saba biraa irratti godhamuu miti. biraa nu waliin jiraatu nageenya isaa mirkaneessuundirqama qabsooti.
Previous articleTerror in Machara, West Hararge as bullets rain on protesters Feb 22, 2016
Next articleEthiopian regime (TPLF) terror: Oromo women are a target of TPLF fascism! Arganne Buji killed Feb 22, 2016
Olmaa Oromia fi Umar Suleyman-Lakki Yaa Wayyaanee **New** 2015
Update on today’s OromoProtests, Feb17, 2016
WHO must reject Tedros Adhanom Ghebreyesus, the criminals who have killed...
The Grand Oromo Rally, Washington DC, September 29